NYE 2021 (प्रि-अर्डर) भिडियो - Djs, Vjs, नाइटक्लब 2020 का लागि NYE काउन्टडाउन
घर / विशेष उत्पादनहरू / NYE 2021 (प्रि-अर्डर) भिडियो
2021 NYE काउन्टडाउन भिडियो (प्रि-अर्डर)
* विशेष आदेशहरू, VIP प्लेटिनम र पूर्ण भन्सार बाहेक। प्रो djs मात्र। विवरणका लागि सोध्नुहोस्
एक विकल्प चयन गर्नुहोस् ... निश्चित छैन! म पछि छान्नेछु। DANCE (मूल) EDM हिप हप ट्रपिकल ल्याटिन होटल र रेस्टोरन्ट VIP प्लेटिनम (विशेष) (reg।) 399।) (+$199.99)
एक विकल्प चयन गर्नुहोस् ... अंग्रेजी फ्रान्काइस इस्पानोल Deutsche अन्य (हामीलाई तलका नोटहरूमा थाहा दिनुहोस्) (+$39.00)
वाटरमार्क वा 'गैर-वाटरमार्क'? *
वाटरमार्क गरिएको NYE काउन्टडाउन.com लोगोको साथ तपाईको काउन्टडाउनको माथिल्लो कुनामा एनिमेटेड मानक हुन्छ। गैर-वाटरमार्क गरिएको संस्करणमा तपाइँको काउन्टडाउनमा NYE काउंटडाउन.कमा लोगो हुनुहुन्न।
एक विकल्प चयन गर्नुहोस् ... वाटरमार्क गैर-वाटरमार्क गरिएको [शीर्ष कोनामा "NYE काउन्टडाउन" ओभरले बिना]
तपाईंको भोल्युल्ड डीजे ड्रपको भ्वाइस र भाषाको प्रकार छनौट गर्नुहोस् तपाईंको काउन्टडाउन अनुकूलन गर्न! यी केहि शीर्ष रेडियो स्टेशनहरु र संसार भर बाट मिडिया बाट पेशेवर आवाज प्रतिभा हो। त्यसोभए, तपाईं राम्रो हातमा हुनुहुन्छ ... र कानहरू।
कुनै पनि पुरुष (अंग्रेजी) महिला (अंग्रेजी) (+$19.00) सेक्सी महिला (अंग्रेजी) (+$19.00) फ्रान्काइस (+$29.00) इस्पानोल (+$29.00) Deutsche (+$29.00) अन्य (हामीलाई तलका नोटहरूमा थाहा दिनुहोस्) (+$49.00)
DJ नाम वा क्लब / प्रायोजक स्क्रिप्ट-अप 10 सेकेन्ड:
यो एक 10 सेकेन्ड सम्म अप छ, पेशेवरले तपाईको Dj नाम, टीमको नाम, क्लब, कम्पनी वा घटना ब्रान्ड गर्न आवाज स्क्रिप्ट र भाषाले तपाईले छनौट गर्नुभएको भाषाको साथ स्क्रिप्ट।
तपाईंको स्क्रिप्टलाई आवाजमा राख्न टाइप गर्नुहोस्।
लोगो अपलोड *
सबै भिडियो काउन्टडाउनहरू इजाजतपत्रको लागि तिनीहरूमा व्यवसाय वा डीजे लोगो आवश्यक हुन्छ। यदि तपाईंसँग लोगो छैन भने कृपया सहयोगका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। (लाइभ च्याट प्रयोग गर्नुहोस् वा हामीलाई ईमेल गर्नुहोस् [इमेल सुरक्षित])
(अधिकतम फाईल आकार5जीबी)
तपाईंको फाईल प्रकार छान्नुहोस्। (1080p मानक - जे होस्, कृपया हामीलाई भन्नुहोस् कि तपाईंलाई 720p चाहिन्छ - अर्को पृष्ठमा नोटहरूमा।)
एक विकल्प चयन गर्नुहोस् ... MP4 - भिडियो एमपीईजी - भिडियो MOV - भिडियो 2K - भिडियो 4K - भिडियो
वितरण डिसेम्बर 12, 2019 ईमेल डाउनलोडको माध्यमबाट सुरू हुन्छ
कुनै पनि वितरण डिसेम्बर 12, 2019 पछि सुरु हुन्छ)
NYE 2021 (प्रि-अर्डर) भिडियो मात्रा
SKU: NYE21PREORDERVIDEO विभाग: विशेष उत्पादनहरू, भिडियो काउन्टडाउनहरू ट्याग: 2021
चेतावनी र जानकारी:
विकल्प: The "NYE काउन्टडाउन "लोगो तपाइँको भिडियो माथिको बाँया कुनामा रहनेछ। तपाइँले यसलाई हटाउन छनौट गर्न सक्नुहुन्छ "NYE काउन्टडाउन" लोगो तपाईंको कस्टम भिडियोबाट ओभरले छनौट गरेर "NON- वाटरमार्क गरिएको" तपाईंको अर्डर राख्दा विकल्प।
लाइसेन्सिंग: सबै भिडियो NYE काउन्टडाउनहरू आउनै पर्छ तपाईंको व्यवसाय लोगोको साथ लाईसेंस पाउन सम्पूर्ण काउन्टडाउनमा प्रदर्शित। कुनै अपवाद छैन। सबै अडियो NYE काउन्टडाउनहरू आउनै पर्छ तपाईंको व्यावासायिक नाम वा डीजे नामको साथ पेशेवर तपाईंको ध्वनि गणना भित्र आवाज उठायो।
गुणस्तर: 4K, 2K मा आउँछ। 1080p वा 720p (वा केहि पनि अनुकूलन तपाईंलाई आवश्यक छ)
लम्बाइ: प्राय:4मिनेट। (वास्तविक लम्बाई -5मिनेट एक संग डीजे मिक्सआउट)
कम्प्याटिबिलिटी: NYE काउन्टडाउनहरू सबै पेशेवर डिस्क जॉकी सफ्टवेयर र DVD / blu रे प्लेयरहरूको साथ काम गर्दछन्। हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई कुनै पनि कोडेक वा ढाँचा आवश्यक समायोजित गर्दछौं। केवल सोध्नुहोस्!
कल: संयुक्त राज्य अमेरिका: 1-800-639-9728 अन्तर्राष्ट्रिय: 1-513-201-1380
60 दोस्रो वेब / टीवी स्पट
रेडियो वाणिज्यिक - 60 रेडियो उत्पादन
सिल्भेस्टर-काउन्टडाउन फर भिडियो - 2020 ड्युचे टान्ज